ဒင်းတို့ လက်မှာ အကျအဆုံး မခံနိုင်ဘူး။
မကြီးပန်ရေ ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
စာတွေကဗျာတွေ ပြန်စရေးလို့လဲ ၀မ်းသာတယ်ဗျ ။
ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ခြင်းနောက်ဆုံးနေ့မှာ...
ဝမ်းနည်း ကြေကွဲမှု တွေရဲ့အဆုံးတစ်ဖက်ဆီသို့ ...
Cheers!! sis ..we try out best for our ppl...
ငါ့နိုင်ငံတော်က ပုပ်လို့ပေါ်၊ ဟုတ်လို့ကျော်
ကဲ……..နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပလား။
ကဗျာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ အမှန်တရားဘက်မှာ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ မရှိလို့ ဖြစ်မယ်း( ၀ဋ်ရှိရင်ကြေပါတော့လို့ သာ ပြောချင်တော့တယ်ဗျာ။
လာမှတ်ချက်ရေးကြသူများ ကျေးဇူးပါ။ ပြန်ပြောဖို့ ခွန်အားမဲ့နေတယ်။
heart breaking..really heart breaking..these broken hearts will eventual heal, but never be the same again!!
i wish I die with them to not see such disaster.
U are great Pan Pan.......
impress & love u...